Sony Xperia Z5 amin'ny horonan-tsary | Androidsis
Alfonso ny voankazo | | IFA, Sony
Toy ny mahazatra dia nanararaotra ny rafitra IFA Berlin i Sony hanolotra ny finday Xperia vaovao. Tamin'ny voalohany, rehefa nampiditra ny Z4 izy ireo, noheverinay fa mety tsy hampiseho finday amin'ity edisiona IFA ity izy ireo. Tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy.
Ary ilay mpanamboatra Japoney dia nanaitra ny antsasaky an'izao tontolo izao tamin'ny nanolorany ny telefaona voalohany tamin'ny efijery 4K, ny Sony Xperia Z5 Premium. Efa efa nandinika an'ity telefaona mahaliana ity izahay Ka tonga ny fotoana hanehoana anao ny fiheveranay ny horonantsary aorian'ny fitsapana ny Sony Xperia Z5.
1 Sony Xperia Z5, raha misy zavatra mandeha dia aza manova azy
2 Toetra teknika Sony Xperia Z5
Sony Xperia Z5, raha misy zavatra mandeha dia aza manova azy
Ny zavatra voalohany miavaka amin'ny Sony Xperia Z5 dia ny fiolany. Na dia isan'andro aza ny feo maro kokoa no mitsikera ny fipetrahan'ny mpanamboatra Japoney, Sony dia manohy miloka amin'ny famolavolana Omnibalance ny fomba niasa tsara, na dia nampiditra fanovana sasany aza.
Ary tsikaritray fa niditra ny ny aoriana kosa somary tsy mitovy, ho fanampin'ny zava-misy fa ny frame izay manodidina ny telefaona dia manana kalitao tsara kokoa ary manana ny anaran'ny haben'ny finday avoakan'i Sony pirinty ao.
Ny antsipiriany iray hafa tena mahaliana dia miaraka amin'ny fanoherana ny vovoka sy ny rano. Mazava ho azy fa ny Sony Xperia Z5 dia tsy misy rano noho ny azy Fanamarinana IP68, Tsy misy zava-baovao eto ambanin'ny masoandro. Saingy miova ny raharaha raha lazaiko aminao fa nahavita ny ekipa famolavolana Sony fa tsy tokony hosaronana ilay mpampitohy USB micro, zavatra izay hankafizin'ny mpampiasa azy.
Toetra teknika Sony Xperia Z5
lanja Gramin'ny 154
Fitaovana fananganana aliminioma sy vera antonony
efijery 5.2 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana 1920 x 1080 sy 424 dpi
processeur Qualcomm Snapdragon 810 V2
Kardan'ny micro SD Eny hatramin'ny 200GB
Fakan-tsary aoriana 23 megapixels
Fitaovana hafa Fantsom-paritra; vovoka sy rano mahatohitra
vidiny 699 euros
Telefaona matanjaka be miaraka amin'ny famaranana kalitao izay ho tonga any Espana atsy ho atsy vidiny 699 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Sony Xperia Z5, fahatsapana voalohany
Gluru, ilay afaka ny ho tena mpanampy virtoaly anao
Lenovo Vibe X3 dia naseho tanteraka